CFM: “Aoka tsy hamoaka voka-pifidianana ny kandidà” | NewsMada
CFM: “Aoka tsy hamoaka voka-pifidianana ny kandidà”
Hatramin’izao, mbola ifampitenenana ny amin’ny famoahan’ny kandidà sasany ny voka-pifidianana. Milaza ny tokony tsy hanaovana izany ny CFM…
“Ny iangavianay amin’ny andraikitra sahaninay ny mba hanajana ny rafitra sy ny andrimpanjakana misahana ny fifidianana. Raha misy tsy fahatokisana azy ireo, tsy fantatra hoe ho aiza ny firenena.”
Izay ny fanambaran’ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, teny Ampefiloha, omaly, momba ny fiandrasana sy famoahana voka-pifidianana. Efa nampoizina izao, araka ny teboka faha-21 ao amin’ny dinam-pifanarahana: fandrarana ny famoahan’ny kandidà voka-pifidianana.
Tsy ny mamoaka voka-pifidianana no inona fa ny filazana tena hoe mandresy. Misy kandidà milaza fa “premier tour de vita”. Nefa tsy mifandraika amin’izay ny voka-pifidianana avy amin’ny Ceni.
Mba tokony hohajaina koa ny voka-pifidianana, araka io teboka faha-21 amin’ny dinam-pifanarahana io. Raha samy hanana ny filazany ny tsirairay, hisavoritaka ambony ambany ny firenena. Tsy midika izany fa hoekena ny halatra sy ny tsy fanjariana.
Ilaina ny fitondrana porofo sy ny fitoriana
Ampirisihiny hanara-maso ny fizotran’ny fifidianana àry ny rehetra, na delege na kandidà na ny mpomba azy. Raha hita fa misy zavatra tsy mety na tsy ara-dalàna, manatona ny fitsarana mahefa ny amin’izany, mitondra fitarainana. Ampirisihina ny fitondrana porofo amin’izany mba tsy hisian’ny halatra amin’ny safidin’ny olom-pirenena.
Eo anatrehan’izao fiakaran’ny hafanana amin’ny politika izao, tsy mitsahatra manao antso avo hisian’ny fifampidinihan’ny samy Malagasy ny CFM. “Aoka isika tsy handranitra ny mpiray donakafo amintsika fa tsy hisy hahazo tombontsoa amin’ny savorovoro sy ny korontana”, hoy izy.
Aleo misoroka toy izay mitsabo, aleo hajaina ny rafitra sy ny lalàna. Antsoiny koa ny rafitra misy mba hanome fahatokisana ny vahoaka malagasy fa ara-dalàna ny zavatra ataony, fa mety misy ny ahiahy tsy ihavanana.